Archive du 16-nov-2021
Hery Rasoamaromaka “Esory izay manampahefana tsy mahavita azy”
Tsy nihambahamba omaly ny Governoran’Analamanga sady Mpandrindra Nasionalin’ny Antoko TGV nilaza sy nampita hafatra amin’ny Filoha Rajoelina hoe: “Esory izay manampahefana tsy mahavita azy”.
Mifanasà vangy eo ihany e!
Raikitra ny fifanasana vangy ara-politika! Miteny sy manakiana ny mpanohitra, dia iny ihany koa fa mivatravatra tsy mitsitsy fitenenana ny manam-pahefana sasany eo amin’ny Fitondrana.
Amparibe Voasambotra ireo 5 lahy nanafika manampahefana
Dimy lahy no voasambotry ny SCUSI (Service Central des Unités Spéciales d’Interventions) teny Amparibe ny alahady 14 novambra
May foana isan-taona i Ankarafantsika “Ny tsy fahafalian’ny mponina matetika no antony”
Miompana amina zavatra 3 lafy ny fandrakofana ala ho an’ny minisitera lefitra misahana izany, raha ny fanazavana tetsy Nanisana omaly.
Andavabato Antanifotsy Potiky ny avandra ny fambolena
Potiky ny avandra ny fambolena any amin’ny Fokontany Andavabato, kaominina ambanivohitra Soamanandrariny, distrikan’ Antanifotsy.
Akaikin’ny Antenimierandoholona Anosikely Nahatalanjona ny mpandalo ilay omby nifatotra
Nanaitra ny mpanara-baovao ny nahita omby mahia iray nifatotra tamina andrin-jiro iray tetsy anoloan’ny fivarotam-boninkazo sy ny vavahady andrefan’ny Parking an’ny Antenimierandoholona etsy Anosikely omaly
Oniversiten’i Fianarantsoa Tapitra ny grevy, miverina amin’ny asany ny PAT
Namoaka fanambarana ny sendikan’ny PAT (Personnel Administratif et Technique) ao amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa, fa nivaha tamin’ny ampahany ny fitakian’izy ka miverina amin’ny laoniny ny asa aman-draharaha
Ambohitrinimanga Namehana Lasan’ny karana ny tany nohajarian’ny mponina nandritra ny 70 taona
Tany nohajarian’ny vahoaka nandritra ny 70 taona tany amin’ny Fokontany Ambohitrinimanga, Ambodiarinarivo, kaominina Ambohibary Namehana,